ကမ်းခြေနှင့်မီတာ ၂၅၀ အကွာတွင်ရှိသောအိမ်ကြီး + ဘား။ - ATLAS Tenerife®အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
ပင်မစာမျက်နှာကမ်းခြေကနေ Big House + ဘား 250 မီတာ!
ရောင်းရန်: La Caleta de Interian၊ Garachico, Tenerife ရှိကျယ် ၀ န်းသော ၃ ထပ်လုံးချင်း!
La Caleta ကမ်းခြေမှမီတာ ၂၅၀ အကွာတွင်သာကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။
သီးခြားလျှပ်စစ်ကောင်တာပါသောအပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသောစီးပွားဖြစ်အဆောက်အ ဦး (လက်ရှိဘားတစ်ခု)! ၎င်းကို၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ကားဂိုဒေါင်တစ်ခုသို့မဟုတ်လူနေအိမ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။